Af soomaali - Västerås
START / Other languages / Af soomaali
Ku soo dhowoow Västerås!
Magaalada Västerås waxa weeye degmo ka mid ah 290 degmo oo Iswiidan ka kooban tahay. Waxaa qiyaastii ku nool magaalada Västerås 136000 oo qof, waana magaalada lixaad ee dalka. Västerås waxay ku taallaa daanta harada Mälaren. Harada Mälaren waxaa ku dhexyaal jasiirado badan oo waqtiga kuleylaha doonni u raaci karto. Waxaana Västerås iyo agagaarkeeda laga heli karaa waxyaalo badan la daawado.
Waxaad la kulmi doontaa hawlaha kala duwan ee degmada qabato waqtiyo kala geddisan. Hawlaha maamulka degmada Västerås qabtaa waxay ka mid yihiin nolol-maalmeedka dhammaan dadka halkaa deggan. Kolka aad dooneyso in aad boos ka hesho xannaanada carruurta, ama aad qabto su'aalo ku saabsan degaanka, ama aad ilmahaaga u raadineyso dugsi wanaagsan, ama aad codsaneyso in lagaa kaalmeeyo hawlaha guriga, amase aad maktabadda buug ka amaahaneyso - waxaad inta badan la xiriirreysaa maamulka degmada Västerås.
Qof walba oo deggan Västerås wuxuu dhakhligiisa ka bixiyaa canshuur dhan 31.84%. Canshuurta la qaadaa waa ay ku filaataa dhammaan hawlaha kala duwan ee degmadu qabato, sida dugsiga barbaarinta carruurta, dugsiyada, waxbarashada dadka waaweyn, nadiifinta waddooyinka iyo fagaarayaasha, dhaqdhaqaaqyada waqtiyada firaaqada ama fasaxa iyo gargaarka dadka waayeelka ah oo u baahan gargaar khaas ah.
Qaar ka mid ah adeegyada degmada adiga ayaa toos u bixiya, qaarna qayb ayaad ka bixisaa qaybna canshuurta ayaa lagu bixiyaa. Balse adeegyo badan waxaa lagu bixiyaa lacagta canshuurta laga helo.
Dhammaan carruurta iyo dhallinyarada Iswiidan ku nooli waa in ay dugsiga dhigtaan kolka ay gaaraan toddoba sano. Waxay sannad ka hor bilaabi karaan dugsiga barbaarinta haddii ay doonayaan. Dugsiyadana lacag la'aan ayaa lagu dhigtaa.
Haddii aadan haysan lacag kugu filan wuxuu maamulka Västerås ku siin karaa kaalmo dhaqaale oo lagu magacaabo kaalmo masruuf. Waana kaalmo dhaqaale oo bil walba lagu siinayo oo loogu talagalay in ay ku filnaato raashin, dhar iyo kiro. Haddii ay kugu adkaato in aad dhaqaalaha isku fileysiiso, waxaad heli kartaa taageero aad dhaqaalahaaga ku qorsheyso.
Waxaa dhacda in dadka waayeelka ah iyo naafada laga caawino hawlaha guryaha. Taas micneheedu waxa weeye in qofka guriga ugu yimaado oo ka caawino nadaafadda guriga, cunta-karinta iyo waxyaalo kale. Kaalmada laguu fidinayaa waxay ku xiran tahay hadba baahida aad qabto. Waxaa kaloo suurtagal ah inaad u guurto guri khaas ahaan loogu talagalay waayeelka ama naafada, halkaasoo kaalmo dheeraad lagu siiyo. Qayb ka mid ah kharashka caawimaadka adiga ayaa bixinaya.
Meelaha la la xiriirayo
Waxaad la xiriiri karta aqalka dowladda hoose si aad u hesho kaalmo dheeraad ah. Cinwaankuna waxa weeye Fiskartorget. Waxaad halkaa kala kulmeysaa hawlwadeenno kugu hagaajiya meeshii aad helil ahayd caawimaadda aad u baahan tahay. Waxayna furan tahay maalmaha shaqada saacadaha u dhexeeya 7.30 iyo 16.30. Maalmaha ciidaha ka horreeya waqtiyo ayuu xafiisku furan yahay. Waxaad kaloo waci kartaa taleefanka degmada Västerås oo 021-39 00 00.
Adeegsi turjubaan haddii loo baahdo
Haddii aadan af-iswiidish kugu filan ku hadlin, waxaa laguu qabanayaa turjubaan kolka walba oo aad degmada Västerås la xiriireyso. Mar walba oo aad xafiis la xiriireyso, u sheeg aad turjubaan dooneyso. Maamulka ayaana mas'uul ka ah sidii turjubaan loo qaban lahaa iyo kharashka turjubaanka ku baxa. Degmada Västerås waxay turjubaan ka dalbataa shirkadda turjubaanada Västmanlands tolkservice oo taleefanku yahay 021-131300, waxaana halkaa ka diiwaansan turjubaano af iyo qoraalba ah oo in ka badan 80 af ku hadla. Bogga internet: http://www.vastmanlandstolkservice.se/